OLEE OTÚ MEE Ọ RỤỌ ỌRỤ YOUTUBE ỌCHỊCHỊRỊ NA ỌNỌDỤ - ADỤ
Olee otú Mee ọ rụọ ọrụ YouTube Ọchịchịrị na ọnọdụ
N'ụwa a nke teknụzụ, anyị na-etinyekarị ngwaọrụ na ngwa ha. Usenwe ọtụtụ ngwa maka ogologo oge nwere ike ịnwe mmetụta dị njọ na ahụike anyị, ọ nwere ike belata ọhụụ anyị mgbe anyị na-elele ihu igwe dijitalụ na gburugburu obere ọkụ. Ọ bụrụ na ị na-enwe obi abụọ na-eche na gịnị bụ isi ihe ndapụta iji lee anya na sistemụ sistemụ gị na ntọala ntọala dị ala? Ka m gwa gị ihe niile gbasara azụmahịa na-acha anụnụ anụnụ nke na-ewepụta na kọmputa. Ọ bụ ezie na ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na-akwado ịlele ntanetị gị dijitalụ n'okpuru ọkụ anyanwụ na-enwu gbaa, mgbe ndị ọrụ kọmputa na-elele ihu igwe dijitalụ nke na-enwu ọkụ ọkụ na-acha anụnụ anụnụ n'abalị niile ma ọ bụ na ntọala ọkụ dị ala, ọ nwere ike ibute ike ọgwụgwụ nke uche mmadụ n'ihi na ọ na-eduga ná mgbagwoju anya mkpụrụ ndụ ụbụrụ gị, anya anya ma na - egbochi usoro ihi ụra nke nwere ike ibute ahụike gị.
Yabụ, YouTube na-eweta isiokwu gbara ọchịchịrị nke, mgbe enyere, nwere ike belata mmetụta nke ọkụ na-acha anụnụ anụnụ na gburugburu ebe gbara ọchịchịrị ma belata nrụgide na anya gị. N'isiokwu a, ị ga-amụ banyere otu esi enyere ọnọdụ ọchịchịrị aka maka YouTube gị.
windo 10 Bluetooth Bluetooth mgba ọkụ na-efu efu
Usoro 1: Kwado Ọnọdụ Ọchịchị YouTube na Weebụ
Usoro 2: Iji aka rụọ ọrụ YouTube Dark Mode
Gbaa mbọ hụ na ike weghachi ebe ọ bụrụ na ihe agahie.
1. Mepee ihe nchọgharị weebụ kachasị amasị gị.
2. Pịnye na adreesị mmanya: www.youtube.com
3. Na ebe nrụọrụ weebụ YouTube, pịa akara ngosi profaịlụ n’elu akuku aka nri. Ọ ga-gbapụta na a ọhụrụ ndepụta nhọrọ maka akaụntụ gị.
4. Họrọ Okwu Ochichiri Nhọrọ site na menu.
windo 10 melite njehie 0x80070020
5. Pịa na Bughari bọtịnụ Na-iji Kwadoro Ọchịchịrị isiokwu.
6. will ga-ahụ na YouTube gbanwere n’ọchịchịrị, ọ ga - adị ka nke a:
Hodzọ 2: M angular Mee ọ rụọ ọrụ YouTube Ọchịchịrị
Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịchọta ọnọdụ ojii YouTube mgbe ahụ echegbula dị ka iji usoro a, ịnwere ike ịmegharị isiokwu gbara ọchịchịrị maka YouTuber na-eso usoro ndị a:
Maka ihe nchọgharị Chrome:
1. Mepee Youtube na ihe nchọgharị Chrome.
2. Mepee Mmepụta menu site na ịpị Ctrl + Mgbanwe + M ma ọ bụ F12 .
3. Site na nchịkọta nhọrọ nke ndị mmepe, gbanwee gaa na Njikwa taabụ & pịnyere ndị na-esonụ koodu na pịa Tinye:
Excel oyi kpọnwụrụ otú ịzọpụta
4. Ugbu a toggle the Dark mode to ON si Ntọala . N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike mfe nwee ọchịchịrị mode gị na ihe nchọgharị maka YouTube website.
Maka Firefox Nchọgharị:
1. Na adreesị mmanya ụdị www.youtube.com na nbanye gị YouTube na akaụntụ.
2. Pịa na ahịrị atọ (Ngwaọrụ) wee họrọ Onye Mmepụta Weebụ nhọrọ.
3. Ugbu a, họrọ Njikwa weebụ & pịnye koodu ndia:
ọkwọ ụgbọala irql bụghị obere ma ọ bụ hà windows 10 fix
4. Ugbu a, gaa na profaịlụ gị na YouTube & pịa Ọchịchịrị Ọnọdụ nhọrọ.
5. Toggle na bọtịnụ na ON maka rụọ ọrụ YouTube Ọchịchịrị na ọnọdụ.
Maka Microsoft Edge Browser:
1. Gaa na www.youtube.com & nbanye na akaụntụ YouTube gị na ihe nchọgharị gị.
2. Ugbu a, mepee Ngwaọrụ Onye Mmepụta na Edge nchọgharị site na ịpị Fn + F12 ma ọ bụ F12 zọ mkpirisi
windo 10 dpc nchedo mebiri idozi
3. Gbanye na Njikwa taabụ & pịnye koodu ndia:
4. See Tinye & ume peeji iji mee ka ' Ọnọdụ gbara ọchịchịrị ’Maka YouTube.
Wepu Internet Explorer na Windows 10
5 zọ wepụ Images si PDF Njikwa
Olee otú Gbanwee Aha njirimara na Windows 10
Esi hazie Ihuenyo ihuenyo na Windows 10
Enwere m olileanya na usoro ndị a dị n'elu nyere aka, ma ugbu a ị nwere ike ịdị mfe rụọ ọrụ YouTube Ọchịchịrị Ọnọdụ na Chrome, Firefox, ma ọ bụ Edge nchọgharị , ma ọ bụrụ na ị ka nwere ajụjụ ọ bụla gbasara ntuziaka a, biko nweere onwe gị ịjụ ha na ngalaba nkọwa.
SysMain / Superfetch na-akpata High CPU 100 diski ojiji Windows 10, M ga-gbanyụọ ya?
N'ebe a, post a na-akọwa ihe ọrụ Superfetch / SysMain na ụzọ 3 dị iche iche iji gbanyụọ ọrụ SysMain (Superfetch) na Windows 10, 8.1 na 7.
Soved: Kernel_security_check_failure Windows 10 (5 na-arụ ọrụ ihe ngwọta)
Ndi gị Computer okuku na kernel nche ego ọdịda mgbe Windows 10 update? N'ebe a, anyị nwere ụfọdụ ngwọta dị irè ị ga-etinye iji dozie ya.
Gbanwee: Enweghị Ngwaọrụ Buotụ Enwere Njehie na Windows 7/8/10
Kwado Flash maka Weebụsaịtị Doro Anya na Chrome
Etu esi lelee Diski maka njehie n'iji chkdsk
Idozi DVD agaghị akpọ na Windows 10
Microsoft Edge na-egbu maramara na Windows 10 1809 Mmelite, Lee ihe ọhụrụ
Idozi Ozi Snapchat agaghị ezipu njehie
Idozi Kalịnda Google anaghị emekọrịta na gam akporo
Chatlọ Nkata Yahoo: Ebee ka ọ kwụsịrị?
Wzọ 4 iji melite ọkwọ ụgbọala eserese na Windows 10
Idozi Windows oyi ma ọ bụ rebooting n'ihi nsogbu Akụrụngwa
ọgbaghara agaghị akwụsị ịlele maka mmelite
otú imelite realtek ọkwọ ụgbọala windo 10
windo 10 mbipute 1903 anaghị etinye
Njikọ mpaghara njikọ enweghị nke ziri ezi
ngwa a na-egbochi mmechi
windo 10 mail ngwa mkpọka